Top Ten 1994-2017: Sedexda Khan Imisa Filim Ayuu Kaheesta 10kaan Filim Ee Ugu Waaweyn!! | Filimside –
Top Ten 1994-2017: Sedexda Khan Imisa Filim Ayuu Kaheesta 10kaan Filim Ee Ugu Waaweyn!!
Ogow marwalba Shah Rukh khan, Aamir Khan iyo waliba Salman khan inee yihiin awooda Bollywoodka tan iyo 90kii, waayo xidig walba xili ayuu awoodisa ku egtahay tusaale ahaan Sunny Deol iyo Govinda waxay kamid ahaayen xidigihii ugu awooda badnaa 90kii balse maanta awoodii 90kii ay lahaayen malaha.
laakiin sedex Khan awoodooda wali ma harin midna calankiisa ma dhicin inkastoo SRK sedex sano kudhowaad uu dhanka Box-officeka awoodisa ku liidato misane uu la yahay filim Hit dhamestiran hadana wali calankiisii uu surtay 90kii kama dhicin.
hadaba waxaan idiin heynaa 10 Filim kuuwaaso ah 10ka filim ee ugu waaweyn Bollyywoodka laga soo bilaawo 1994-2017 aflaamtii aysameyeen anagoo idiin kugu so gudbin doona sidee ukala weyn yihiin.
Khanska ayaa ugu badan 10kaas Filim ee ugu waaweyn tan iyo sanadkii 1994 ilaa iyo hada aflaamtii lasameyay, hadaba sedexda Khan imisa Filim ayuu Top Ten kaas kasitaa, aan isla ogaano halkaan hoose kaga bogo aflaamta iyo sidee ukala horeyaan.
Hum Aapke Hai Koun (1994): waxaa hogaamiyaal ka ah Salman Khan iyo Madhuri Dixit waana filim noqday All Time Blockbuster waana filimka kaliya ee ugu weyn tan iyo 1994 ilaa iyo hada.
Baahubali 2:(2017) (Waa Filim Koonfur India ah balse liiska kaalinta labaad ayuu kasoo galay): waxaa hogaamiyaal ka ah Prabhas, Anushka Shetty iyo waliba Rana waana filim Telugu ah balse af Hindi lagu daawaday wuxuuna liiskan kasoo galay kaalinta labaad sida Box-officeka india aan kasoo xiganay, darajadiisana waa All Time Blockbuster.
3. Gadar-Ek Prem Katha: (2001), waxaa hogaamiyaal ka ah Sunny Deol, Amesha Patel iyo Amrish Puri waa filim noqday All Time Blockbuster wuxuuna kujiray booska labaad balse Baahubali 2 ayaa kala wareegay booskaas.
4. Dilwale Dulhania Le Jaayenge: (1995), waxaa hogaamiyaal ka ah SRK iyo Kajol darajadiisana waa All Time Blockbuster kaalinta sedexaad ayuu kujiraa marka laga hadlo Bollywood Movies balse hada kaalinta afaraad ayuu kaga jira dhanka Box-officeka maadama Baahubali 2 oo aan Bollywood ahen kaalinta labaad ama booska labaad tiiksaday.
5. Raja Hindustani: (1996), waxaa hogaamiyaal ka ah Aamir khan iyo Karisma Kapoor waana filim noqday All Time Blockbuster kuna jira Top Tenka ugu waaweyn aflaamta Bollywoodka.
6. Dangal: (2016), waxaa hogaamiye ka ah Aamir Khan waana filimka ugu weyn sanadkii 2016 dhamaan aflaamti lasameyay sidaa awged ganacsiga lixaadka leh aee uu sameyay filimkaan wuxuu kutiigsaday booska 6 naad inuu kagalo 10ka filim ee ugu waaweyn sido kalen uu noqdo All Time Blockbuster.
7. Border: (1997), waxaa hogaamiyaal ka ah Sunny Deol, Jackie Shroff, Suneil Shetty iyo waliba Akshaye Khanna, waana filim weyn kana mid ah aflaamta Bollywoodka ugu waaweyn abid, wuxuuna noqday All Time Blockbuster taaso ah darada ugu sareysa ee uu filim tago.
8. PK: (2014),waxaa wada hogaaminayaan Aamir Khan iyo Anushka Sharma, wuxuuna kujiraa aflaamta Inida baalka dahabiga ka galeen darajadiisana waa All Time Blockbuster.
9. Kuch Kuch Hota Hai: (1998), hogaamiyaasha filimka waa SRK, Kajol iyo Rani mukherji, KKHT wuxuu noqday All Time Blockbuster waana filim kamid ah aflaamta ilaa iyo haatan loogu jecelyahay filimada ay sameyan hindiga.
10. Bajrang Bhaijaan: (2015), Salman Khan ayaa hogaaminaya sido kalena waxaa la hogaamineysa Kareena Kapoor waana filim weyn oo noqday All Time Blockbuster sido kalen soo tiigsaday kaalinta 10aad.
guud ahaan Bollywoodka oodhanba waxay sameyeen 11 Filim oo darajada All Time Blockbuster noqdeen laga soo bilaawo 1994 ilaa 2017 aflaamti ay sameyeenba.
hadaba darajadaas oo ah darajada ugu sareysa ee uu filim tago 11 filim marka lagu daro filimka Baahubali 2 ee aanan aheyn Bollywood balse liiska Box-officeka india kujira waxay noqoneysa 12 Filim oo ilaa iyo hadan ah All Time Blockbuster 1994-2017.
hadaba labada filim ee aan kasoo tagnay waa 3 Idiots iyo Dhoom 3 maadama maqaalkena aan oga hadleeno kaliya 10ka filim ee ugu waaweyn Bollywoodka iyo Sedexda Khan inta filim ee uu kaheesto.
Sida kor kucad Aamir Khan ayaa ugu badan darajadan mana jiro xidig soo gaaray ama usoo dhowba, wuxuu sameyay 5 Filim oo noqdeyn All Time Blockbuster balse 10ka aan kor kusoo xusnay waxaa ugu jirta kaliya 3 Filim.
Aamir Khan: 3 Filim
SRK: 2 filim
Salman khan: 2 Filim
Sunny Deol: 2 Filim
Prabhas: 1 Filim
hadaba aqriste Top Ten kaan kor kuxusan filimkee jeceshahay ama aad ka xiiseesa?
lovely isxaq says:
pk wxd ino soon dysa xqiqyn u gaara filka pk
Sxb zaki waxan kuweydii Nana patekar ma Muslim baa mise Christian
Sxb zaki qof baan isku haysana noo kala bixi
Sxb Nana Patekar Waa Hindu Balse Walaashiis ayaa Qabo Shaqsi Muslim ah Balse Mahuba Midaas Oo Maku Dambaabi Karo Balse Nana Waa Hindu Sidaa Daraadeed Zakarie Isagane Hakaaga jawaab Haduu Diin Kale Ku Maqaal Yahay
cismaan gadhyar says:
Sxbyl admins ka page ka su aal iiga jawaaba bahubali 2 iyo HAHK ee salman keebaa weyn labada filin oo lacag baden ‘marka loo xisaabiyo gudaha hindiya oidhan labada filinba luuqada ay doonaan ha ahaadeene
Gudaha Hindiya oo dhan hadii lacagta la xisaabiyo Baahubali 2 ayaa weyn laakiin qaybta Af Hindiga kaliya hadii la xisaabyo HAHK ayaa weyn
Moha Slam says:
Sxp Zaki Bahubeli Isagoo af somali ah majiraa ‘ Ta kale Dangal isagoo af somali ah majiraa ‘ mahadsanid
Donn br says:
sxp inkasto an fanz u ahay salman
hadana Aamir lama xaqiri karo the one waye
wana xiiseya jiliinkiisa cajiibka aha
aflantan fmka an igu jclhy wa DHOOM 3
dilwale dulhani lejayenge aya ku leh sxb